कारागारमा भैलो : छानामाथि घिरौँला, कति दिन थुन्छन् हेरौँला ! – The Public Today
कारागारमा भैलो : छानामाथि घिरौँला, कति दिन थुन्छन् हेरौँला !
विजय कुमार सिंह कात्तिक ९, २०७६ ८:४५ am
महोत्तरी, कार्तिक ९ गते : मध्य दशैँमा कारागारको बाटो लागेका सभाको मुखलाई तिहारमा पनि उतैको बास जुर्‍यो । सभाको मुख नै कारागार पुगेपछि हातखुट्टा र शरीरका अरु पाटपुर्जा मात्रै बानेश्वरतिर हुने कुरै भएन ।
जे गरे पनि – आहा होस् ! – उज्जयालो